वर्षा ‘इन’, वर्षा ‘अाउट’ !::Online News Portal from State No. 4
वर्षा ‘इन’, वर्षा ‘अाउट’ !
नेपाली रजतपटमा दुर्इ नायिकाको नाम र अनुहारमा धेरै झुक्किन्छन्। यी दुईलाई ठम्याउन अलिकति मिहेनत गर्नै पर्छ। पेशा, अनुहार र नामका कारण समान देखिने यी नायिकाद्वय वर्षा राउत र वर्षा शिवाकाेटी एक अर्काका विकल्प समेत हुन्। केही समय अघि नेपाली सिनेमा ‘मेरो पैसा खोइ’मा वर्षा सिवाकोटी रहने लगभग निश्चित भएको थियो। पछि उनलाई विस्थापित गर्दै नायिका वर्षा राउतको प्रवेश भयो। त्यस्तै ‘रानी महल’मा पहिले वर्षा सिवाकोटी अनुबन्धित भएकी थिइन् भने पछि नायिका वर्षा राउत हुने चर्चा चलेको थियो। भलै त्यस भूमिकामा मिस नेपाल निकिता चन्दक हुने फाइनल भयो।
नेपाली चलचित्र नाई नभन्नु ल ५ मा वर्षा सिवाकोटीको नाम चर्चामा रहेको थियो। पछि उनी आउट भइन् भने वर्षा राउतको इन्ट्री भयो। सिवाकोटी आउट र राउत इनको खेल गोपी मा पनि दोहोरिएको छ। हाल प्री प्रोडक्सनको काम भइरहेको चलचित्र ‘गोपी’मा केही दिन अघि नायिका वर्षा सिवाकोटी फाइनल भएकी थिइन्। गोपीमा वर्षा अघि नै अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त फाइनल भइसकेका छन्। कार्यकारी निर्माता श्रीधर पौडेलका अनुसार वर्षा सिवाकोटीको समयका कारण गोपी बाट हात झिकेकी हुन्।
आपसी समझदारीमा नै निस्केका सिवाकोटीको स्थानमा राउतलाई इन्ट्रि गराइएको पौडेलको भनाई रहेको छ। यसअघि सिवाकोटीलाई गोपीमा अनुबन्धन भएबापत केही रकम पारिश्रमिक पनि दिइसकिएको थियो। भदौ १ बाट छायाङ्कन सुरु हुने चलचित्रलाई दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्दैछन् भने श्रीधर पौडेल यसका कार्यकारी निर्माता हुन्।